Malleeshiya Gobaleedka ee Gobolka Bari ayaa xoog ku qabsaday Bangiga dhexe ee Garoowe
Buluugleey November 06, 2005
Bangiga Dhexe ee Garoowe ayaa waxaa qabsaday malleeshiyo gadoodsan ee ka soo baxay Jiida hore ee deegaanka Aricadeeye, kadib markii ay maamulka gobolka Bari u awoodi waayeen inay wax mushaharada ah siiyaan.
Ciidanka maamulka Bari ayaa xalay saqdii dhexe weerar gaadmo ah ku qaaday malleshiyada xoogga ku heysatay Bangiga Dhexe oo sida uu wararku sheegayaan ku hubeysan tikniko iyo hub aad u cul-culus. Ujeedada weerarkaas oo lagu doonayey in malleshiyadaasi soo weerartay bangiga looga saaro ayaa ku dhaawacmeen dhoor nin dhimashadana aan ilaa haatan la ogeyn inta ay gaarsiisantahay.
Malleshiydaasi oo weli haysata Bangiga Dhexe ayaa curyaamiyey hawlihii caadiga ahaa ee Bangiga Dhexe Garoowe, waxayna malleeshiyadasi shuruud ka dhigeen maamulka Gobolka in marka hore ay siiyaan mushaaharadooda inta aynan bangiga ka bixin. Waxay malleshiyadaasi ay sheegayaan in aynan wax mushaaraha qaadan inta ay ku sugnaayeen jiida u dhaxeeyso labada gobol ee Waqooyi Galbeed iyo Waqooyi Bari oo in mudaba xisadi colaadeed halkaasi ka aloosneyd.
Gobolka Bari ayaan lahayn ilo dhaqaale ee ku filan oo lagu fulin karo hawlaha lagama maarmaanka u ah maamulka gobolka. Waxayna amaan darrida haatan taagan la soo deristay maamulka gobolka Bari salka ku haysa dhaqaale xumo oo sababta ugu weyni tahay faragelinta siyaasada qallafsan ee Col. Cabdullahi Yusuf ee ku dhisan beel-tooxsi iyo nin jecleysi. Malleeshiyada qabsatay Bangiga Dhexe ee Garoowe ayaa ka tirsan malleshiyo beeled oo Col. Cabdullahi ay isku heyb yihiin oo intii uu madaxda ka ahaa maamulka uu hubka waaweyn uu malleshiyadaasi gacanta u geliyey. Taasina waxay meesha ka saartay in madaxa sare ee haatan maamulka gobolka Bari gacanta ku haya aynan awood u lahayn inay hor istaagaan amaandarada la soo deristay gobolka.